Ubulungu beVIP ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30 kuzo zonke iiMveliso- Gamepron
Nantoni na oyikhangelayo ngokubhekisele kwiihacks, kutheni ungahambi kwindlela yeprimiyamu? Joyina usapho lweGamePron ngobuLungu be-VIP namhlanje kunye namava ukuba kunjani ukuqhekeza kubunewunewu!
Sele ubuthengile ubulungu? Fumana amanyathelo alandelayo apha
I-10% yekhuphoni lesaphulelo sakho.
Fikelela kwiseva yethu yengxabano yabucala.
Indima yokuqalisa kumncedisi we discord.
Inkxaso yokuqala kunye noncedo.
Ukuseta ukuqeshwa kwasimahla ukuba kuyafuneka.
Izitshixo zasimahla kunye nokunikezela.
Sebenzisa iingcebiso zeemveliso.
Ukufikelela kweBeta kwiimveliso ezintsha.
Fikelela kwiimveliso zabucala (iyeza kungekudala
I-20% yekhuphoni lesaphulelo sakho.
Indima yePremiyamu kwiseva yengxabano.
Inkxaso yeNkulumbuso kunye noncedo olukhawulezayo.
Fikelela kwiimveliso zabucala (iyeza kungekudala)
I-30% yekhuphoni lesaphulelo sakho.
Indima ye-VIP kwiseva yokungaboni ngasonye.
Inkxaso ePhambili ngokubaluleka kunye noncedo olukhawulezayo.
Thenga VIP Ubulungu in 3 amanyathelo
IiHacks zemidlalo, iAimbot, akukho kubuya mva, i-ESP, iWallhacks kunye nokunye
Khetha ukhetho lobulungu olufunayo
Khetha kwizinto ezintathu ezahlukeneyo zobulungu kwiakhawunti yakho yeMidlaloPron
Olunye ukhetho lobulungu luya kubonelela ngamanqanaba ahlukeneyo ezaphulelo, ngelixa abanye baya kukunika ukufikelela kweBeta!
Ukuchuma ngelixa usiko!
Akukho mntu unokukuxelela indlela yokudlala imidlalo yakho, ngakumbi xa sele ulilungu le-VIP ngeGamePron
Kutheni ndisebenzisa ubuLungu beVIP?
Awufuni kuziva ngathi ushiywe xa usiza kwi-hacks, sinokukuthembisa. Kuhlala kukho izixhobo ezitsha kunye nohlaziyo olwaziswa apha kwiGamePron, yiyo loo nto abasebenzisi bethu bengenanto ngaphandle kwezinto ezintle abanokuzithetha ngenkonzo yethu. Ukuba ulonwabele ixesha lakho apha kwi-GamePron njengelungu eliqhelekileyo, uza kuthandana nengcinga yokuba yi-VIP.
Siza kunceda abathengi bethu xa kunokwenzeka, nokuba uyi-Starter, iPremiyamu, okanye i-VIP ayinamsebenzi - siza kunyanga i-VIP “ekhethekileyo”! Ukuba awufuni kuphulukana nalo lonke inyathelo apha kwiGamePron, zenzele ubabalo kwaye ubhalisele ubulungu bethu beVIP namhlanje!
Ubhaliso lwe-VIP bubulungu obusekwe ukuze ufumane izibonelelo ngaphezulu kwabasebenzisi abaqhelekileyo.
Ndingasisebenzisa isaphulelo sam buqu kwizitshixo zeveki kunye nezenyanga?
Ewe! Ungasisebenzisa isaphulelo sakho nakweyiphi na imveliso enikezelwa apha kwiGamePron.
Ndikutshitshisa njani ubhaliso lwam?
Ungaburhoxisa ubulungu bakho be-VIP ngokuya kwiwebhusayithi yeMidlalo ePron kwaye uhlengahlengise useto lweakhawunti yakho. Uya kufumana ukhetho "Rhoxisa" phantsi kweSeto seProfayili, kwaye konke okufunekayo kukucofa kanye ukuze ungabhalisi (kunye nokubhalisela kwakhona!). Unako kwakhona ukuphucula okanye ukuthoba ubulungu bakho apha.
Yintoni ukufikelela kweBeta?
Kulapho sinika khona amalungu e-VIP ithuba lokuvavanya izixhobo ezingakhululwa, ukubanika ukufikelela kweBeta njengesiphumo.
Yintoni useto lokusetwa simahla?
Ukukopela kunokucwangciselwa wena ukuba ulilungu le-VIP, konke okufuneka ukwenze kukusebenzisa amalungelo akho okuseta asimahla.
Ngaba umrhumo wam uvuselela ngokuzenzekelayo ngenyanga?
Ubhaliso lwakho luya kuhlaziya ngokuzenzekelayo inyanga nenyanga, njengoko uza kubona ngalo naliphi na ubulungu bendabuko obusekwe kubulungu.
Yintoni kwiseva yeDiscord?
Iseva ye-Discord (eyaziwa ngokuba yiMidlalo ePhononongiweyo yaMalungu) kulapho unokunxibelelana nabantu abathanda izinto ezifanayo, kwaye ungade uthethe nabalawuli ukuze ufumane uncedo ngokungxama-sitsho sinikezele nge-VIP!
Zithini Iingcebiso zeMveliso?
Xa ulilungu le-VIP uhlakulela ubudlelwane obusondeleyo neqela leMidlaloPron, kwaye sinokucebisa ukuba zeziphi iimveliso eziza kukufanela.
Yintoni iNkxaso yeNkulumbuso?
Inkxaso yeNkulumbuso ngamava enkxaso kubathengi anokufikelelwa kuphela ngamalungu ethu abaluleke kakhulu. Iikitikiti zakho zenkxaso kunye nemigca yokuxoxa ziya kufumana impendulo ngokukhawuleza kunaye nabani na!
Kuhle imidlalo yokuzonwabisa Hacks Iimbonakalo